အန်းဒရွိုက်သည် notepad | notepad က App | Apps ကပ APK ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » notepad က App
notepad က App APK ကို
android ဖုန်းများအတွက် notepad
ညာဘက်သင့်ရဲ့ Android အပေါ်ကို Notepad တစ်ခုအသစ်အဆင်ပြေနဲ့ရိုးရိုး notepad GO ။ notepad သင်၏လက်ကိုမှာအမြဲဖြစ်တယ်, သင်ရုံသင်ပြုသို့မဟုတ်သင်မေ့လျော့ချင်ကြပါဘူးဘာသင်ပင်သင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြုမယ်လို့မကယ်မပါဘူးစခွေငျးငှါလိုချင်တာတွေရေးချဖို့ရှိသည်။
သငျသညျဆောင်းပါးတွေအများကြီးစွန့်ခွာလိုခြင်းနှင့်သင်လိုချင်သောတဘယ်မှာမသိကြသလော အကယ်. အသစ်ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေပါလိမ့်မယ်
- ရှာရန်မှတ်စုများ, ရေးဆွဲ
- notepad ဖိုင်တွဲထဲမှာ SD ကသို့ရုပ်ပုံများကို Save
- ထိုပုံ၏အမည်, သို့မဟုတ် note ကိုပြင်ရန်
- Eraser ကိုလင်းမြင်သာမှုနောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ, ဒီအလွှာ၏တက်ကြွသောအလွှာသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရေးကနေအရောင်ဒေသများတွင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုသည်။
- အရောင်ရွေးချယ်မှု, အထူ, ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူထိတွေ့တစ်ရေးခွကဲ့သို့ပုံကြမ်းများအတွက်ပျဉ်ပြားကြံစည် Support
- အဆိုပါ "Bookmark Add" သင့်မှတ်စု၏ Desktop ကိုဖြတ်လမ်းထားရန်သင့်ကိုကူညီတစ်ခုသို့မဟုတ်သတိပေးချက်အဖြစ်ဆွဲပါလိမ့်မယ်။
- ဝေမျှမယ် ICQ Gmail, ဘလူးတုသ်, Skype ကို, Facebook, Vkontakte, Flickr, တွစ်တာမှတ်ချက်ပြု
- Drawing, အရောင်ရွေး
- drawing ဓာတ်ပုံမှတ်စု
- Photoshop ကို
- Voice ကိုမှတ်ချက်
- SD ကဒ်မှ Backup ကို / သွင်းကုန် / ပို့ကုန်
နေ့စဉ် / အပတ်စဉ် automatic backup လုပ်ထားအချိန်ဇယား /
- Password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
သင်တစ်ဦးဖန်တီးမှုလူတစ်ဦးဖြစ်ပါသလား သင်သည်သင်၏အတွေးအခေါ်များမှတ်တမ်းတင်ဒါပေမယ့်လည်းပုံအဖြစ်ပုံကြမ်းပြုပါ, သို့ဖြစ်လျှင်ဤသစ်ကို notepad သငျသညျအဘို့ဖြစ်၏မှသာလိုအပ်!
ဒီ feature နှင့်အတူ, သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူပုံကြမ်း, ရေးဆွဲ, ဒါမှမဟုတ်လက်ရေး၏ပုံစံအတွက်မှတ်စုတစ်ခုလုပ်အဖြစ်မှတ်စုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
တောက်ပ palette နှင့်တက်ကြွသောအရောင်အဆင်းဟာပုံဆွဲကာလ၌လူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ခံစားချက်များကိုဖော်ပြရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်။
လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option ကို၎င်း၏ကလောင်နဲ့ device ကို Samsung ၏ Galaxy Note ကိုဖြစ်ပါသည်, သင်တစ်ဦးလက်ရာဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
အစာရှောင်ခြင်း, လွယ်ကူသော, လှပသည့်အချိန်တွင်မဆိုသုံးစွဲနိုင်။ ဒါဟာသင်လိုအပ်ကဘာလဲ
notepad app ကို android ဖုန်းများအတွက် notepad မှတ်စုများ
FAIROZE PASHA says:
မတ်လ 28, 2017 မှာ 2: 53 ညနေ
ကိုယ့်တိုင်းအရေးကြီးသောဒေတာများကိုစောင့်ရှောက်ရန်အံ့သြစရာကဒီ Notepad app ကို အသုံးပြု. နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ဖုန်းအသစ်ငါ့ sim ကိုပြောင်းလဲချင်, ငါ့ကိုအားလုံး notepad အချက်အလက်များ၏ backup လုပ်ထားယူဖို့ဘယ်လိုသိစေပါ။ ဒါပေမယ့်ကို Notepad ၏ backup လုပ်ထားဒေတာယူပုံကိုသိ dont ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ။
ဇူလိုင်လ 22, 2016 မှာ 6: 50 နံနက်
ဌကယ့်ကို notepad လျှောက်လွှာကိုငါ့ဟာ android ချင်
Nayem အယ်လ် Hasan says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2014 မှာ 11: 39 နံနက်
ကိုယ့်ကိုကို PC ၏ပြတင်းပေါက် operating system ၏မှတ်စု pad ပါသကဲ့သို့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်သော Android ဖုန်းများအတွက်မှတ်ချက် pad ပါ၏ဤအမျိုးအစားချင်
နိုဝင်ဘာလ 8, 2014 မှာ 10: 24 ညနေ
ငါကွန်ပျူတာ Software များ (notepad) အားအပြည့်အဝအလားတူအဖြစ်ဟာ android တွေအတွက်အမှန်တကယ် notepad application ကိုလိုခငျြ